रवि लामिछाने जी! नया सिराबाट जिबन सुरू गर्नुहोस ! शुभ कामना !! | Canadian Reporters
Posted on January 5, 2019 , updated on January 5, 2019 by क्यानेडियन रिपोटर्स
बत्ति मुनि अँध्यारो त हुन्छ, तर बत्तिले धेरै पर सम्म उज्यालो दिन्छ। रवि लामिछानेले आफ्नो पीडालाई भुलेर संसारलाई उज्यालो र न्यानो दिने जुनकाम गरेका छन् त्यो सत्कर्म हो। भगबानको घरमा कुकर्मलाई तुरून्तै क्षमा गर्ने तर सत्कर्मबापत भने अलि ढिलो प्रतिफल दिईने नियम हूनुपर्छ। किनकि धैर्यताको परिक्षामा पास- नभई पुरष्क्रित गरिदा खराब नजिर बस्न पनि सक्छ। तर गल्तिलाई गल्ति महशुस गरे पछि तत्काल क्षमा नगर्दा मानिसको सुध्रने सम्भाबनामा ब्रेक लाग्छ।
हाम्रो अनुमानमा रवि लामिछाने जि र ईशा लामिछानेजीको पहिलो पबित्र प्रेम नियतिको सिकार बन्यो। कमि कमजोरि दूबै तर्फ बाट भये होलान। यो बाहिरबाट अरूले यकिन गर्न सकिने कुरा हैन र गरिनु पनि हून्न। हामिले बुजे देखेको भनेको एऊटा सफल प्रेम कालन्तरमा असफल बिबाह बनेछ। सफल प्रेमको असफल बिबाह नै सहि, अब बिगत बाट पाठ सिकेर नया सिराबाट आफ्ने नया जिबन सुरूगर्नुको बिकल्पमात्र दुबैलाई ऊपलब्ध छ।
अलिकती घाउ् अलिकति रोमान्स, अलिकति माया, अलिकति धृणा, एक आर्कोबाट अलिकति असुरक्षा तर धेरै सुरक्षाको ऐहेसास हुनुनै सफल माया र बैबाहिक जिबनको चूरो मर्म हो। जब बैबाहिक जिबन भित्र एक आर्काको ब्यबाहार मार्फत धेरै असुरक्षा, थोरै मात्र सुरक्षाको ऐहेसास लाग्न पुग्छ, जब त्यो बारम्बार दोहरिन्छ, कालन्तरमा त्यो सम्बन्ध नियतिको सिकार बनि टुटेको पाईन्छ।
मनौबैज्ञानिक अध्ययनको बिश्लेषणमा बुडा-बुडि विच एकआर्काको ब्यबाहार बारे नजानिदो तवरले दरार पैदागरि डिभोर्ससम्म पुग्ने नियति एकआपसबारे हुने जजमेन्ट-ईन-ईरर (error in judgements) ले पैदागर्ने गर्छ। आफ्ना वरिपरि रहेका आफ्नो एक्सटेन्डेड फेमिलिका (Extended Family) रूपमा रहेका आफ्नै नियरेस्ट-एन्ड-डियरेष्टहरू (nearest & dearest ones) तेति बेला यो सबन्धको घाऊमा जानि नजानि नुनचूक दल्न थाले र तेसैको बिश्वासमा पर्दैगर्दा असमजदारिले सिमा नागेको पत्तो नपाऊदा आन्तरिक खटपट सयगुना बड्छ। जसले पबित्र बैबाहिक सम्बन्धनै कहिलै जोड्नै नसकिने गरि चूडिने मोडसम्म सजिलै पुराईदिन सक्छ।
याहानेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरो केहो भने, डिभोर्सले बुडा-बुडिको सम्बन्ध त अन्त गर्ला ! तर भूपु बुडा-बुडिको सम्बन्ध अन्त गर्दैन। न त बैबाहिक सम्बन्धको अमुल्य ऊपहारका रूपमा प्राप्त सन्तान दरसन्तान सँगको नातानै तोडन सक्छ। आफ्ना नितान्त आन्तरिक सम्बन्ध र बिबादहरू लाई निस्चित दायरा भित्र सिमित गर्न सकिएन भने, तेस-भित्र आफुलाइ बर्सौदेखि सामान्य चिनजान पछि छाडेकाहरु, आफ्ना कुनै समयमा पनि मित्र नरहेकाहरू र आफूसॅग गोरूबेचेको नाता बसेकाहरु समेत सम्झि सम्झी नुन चुक दल्न आईपुग्छन्। जून दुबैका प्रिय सन्तान दर-सन्तानको स्वभिमान, आत्मा-सम्मान र ऊज्वल भबिस्यको लागिसमेत बिसालु बन्ने छ।
प्रकृतिको नियम निकै निर्मम हुन्छ। महिला पुरूष मिलि आपसि सहभागिता र सहमतिबाट सन्तान जन्माऊन सबैलाई छुट हुन्छ।तर आफैले जन्माएको भन्दै ति सन्तानको न त भौतिक जिबन न भबिस्य सॅग नै खेलबाड गर्ने अधिकार ति माता-पितालाई रहन्छ।माता पितासॅग त तेसको ठिक बिपरित आफ्ना सन्तानको भबिस्य निर्माणमा निस्वार्थ सहयोग गर्ने जिम्बेबारि प्रकृति ले नै सुम्पेको हुन्छ।
यस सन्दर्भमा बाहिरबाट हामिले आशा गर्ने भनेको रवि जि र ईशा लामिछाने जी ले आफ्ना नितान्त आन्तरिक सम्बन्ध र बिबादहरू निस्चित दायरा भित्रैबाट सुल्जाऊने हो; बजारमा ऊपलब्ध कुनैपनि पसलहरू ले यसलाई झन् टक्सिक (Toxic) पार्न त सघाऊला तर समाधान तर्फ किंचित सहयोग गर्न सक्ने छैन भनि छिट्टै मनन गर्नु हुनेछ भन्ने मात्र हो।
मनमा लागेका चोट, आफन्त सॅगै चुडिएको मन र तेसले पैदागरेको निरस र निरास जिबनको हालसम्म ऊपलब्ध एकमात्र ऊपचार एकले आर्कालाई ऊसको भागको गल्तिका लागि बिसाल हृदयवाट दिईने क्षमा मात्र रहेको यथार्थ लाई स्बिकार्नु र मनन गर्नु हो।अन्य कुनै भौतिक कर्मले यो मनोवैज्ञानिक क्षतिको पुर्ति गर्न सक्ने छैन।
बिगत लाई चटक्कै बिर्सेर नया सिराबाट नया जिबनको सुरूबात ले दानव त मानब बन्छ भने प्रतिष्ठित मानव रहिसक्नु भएका तपाई दुबै रवि लामिछाने र ईशा लामिछाने सजिलै माहामानब बन्न सक्नु हुनेछ। तपाईहरू दुबै सॅग ठूलो आशा लिएको हाम्रो समाजको लागि र तपाईहरूकै आफ्नै पृय सन्ततिका गर्बका खातिर पनि तपाई दुबैको नया सिराबाट जिबन सुरूहोस र भबिस्य ऊज्वल रहोस। बस यहि शुभकामना॥
सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामिछानेलेको खुलासा:
मेरी पुर्व पत्नीलाई प्रयोग गरि मेरो वास्तविक रुप अर्कै हो भन्ने प्रमाणीत गर्न दिन रात लाग्नु हुने साथीहरुलाई मैले पहिलापनि भनेकै थिए कि टाईम खर्च गर्नै पर्दैन, सिधै मलाई सोध्नुहोस, मै बताईदिन्छु सबै कुरा। मलाई खोक्रो आदर्श र झुठो जिन्दगी बाच्नु छैन र म त्यति आदर्शवान मानिसपनि होइन।
मैले करिब २४ वर्ष अगाडि सानै उमेरमा बिवाह गरेको थिए र हालसालै मेरो सम्बन्ध बिच्छेदपनि भैसकेको छ। तर बर्षौ सम्म मतभेद, अलग बसाइ र बोलचाल समेत नभएपछि राजी खुशीले आफ्ना सबै अधिकार लिएर म सङ सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी पुर्व पत्निले आफू म बाट अन्यायमा परेको र मेरो कर्तुत सर्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर केही पत्रकारलाई सम्झिछ्न।लगभग २४ वर्ष अघि भएको बिवाहमा आएका अनेकौं घुम्तीलाई बजारमा लिलाम गर्ने उनको मनशाय आफ्नै मगजको उपज हो वा कसैबाट प्रयोजित हो त्यो म जन्दिन तर कसै कसैले “रबिको कर्तुत” वा “रबिको असलीरुप” जस्ता शीर्षक “रेडि टु पब्लिस” अवस्थामा राखेको थाहा पाएकोले उहाँहरु सबैको काम सजिलो पार्दै म आफै आफ्ना कर्तुतहरु कबुल गर्दैछु।
अमेरिका मै छदा म परिवार भन्दा अलग बस्ने गर्थे।सम्बन्ध सुधार गर्ने मेरो बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि म एक बिदेशी प्रेमिका सङपनि बसेको थिए ।६/७ वर्ष पुरानो यो घटनाको कारण उजागर गरेर म मेरा सन्तानको प्रतिष्ठामा ठेस पुर्याउन चाहन्न।
मलाई त ब्यक्तीगत बिषयमा एक शब्दपनि बोल्न मन थिएन। र सम्भावत यो मेरो जिवनको पहिलो र अन्तिम स्तरहिन टिप्पणी वा Status हुनेछ। हेडलाईन नै हेरेर धारणा बनाउनेहरुले मलाई एक मिनेटमा नै ठुलै अपराधी बनाउनेछन। मान्छे दुनियाँसङ लड्न सक्छ तर आफन्त सङ सक्दैन। अमेरिका मै रहदा अलग बसेका हामी बिगत १० वर्ष देखि नै अलग छौ। कारण र घट्ना एउटा होइन अनेक छ्न।जति छ्न ती अत्यन्तै लाज मर्दा छन।ती बिदेशी मुलकी पुर्व प्रेमिका र मेरो बिचमा एक सन्तानपनि छ।
ज्यादै अप्रिय बिगतलाई टुंगोमा पुर्याउने अन्तिम उपाय कानुनी उपचार नै हो र हामिले वर्षौको अशान्ति र असन्तोषलाई सहमति मै टुंगोमा पुर्यायौ, परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा, कानुन ब्यवसायीहरुको मद्दतमा, उनले भनेका हरेक शर्तहरुको पुरै पालना गरेर। ईजलासमा प्रस्तुत सम्बन्ध बिच्छेदको मिलापत्र हेर्दै न्यायाधीश श्रीमानले सोध्नुभयो, सबै कुरा आफ्नी श्रीमतीलाई दिनु भएछ, सन्तानको जिम्मापनि आफैले लिनु भएछ, अमेरिकामा उहाँहरु बस्ने घर र उहाँहरुको खर्चपनि तपाईं कै जिम्मामा लगाईएछ। अब तपाईं सङ के बाकी छ त?
मैले जवाफ दिएको थिए, श्रीमान म जीउँदै छु।कुनै पत्रकारलाई म्यासेज मार्फत मेरि पुर्व पत्निले मलाई परिवारलाई रुवाएर भागेर नेपाल गएको भनेर लेखिएको र मेरो वास्तविक रुप देखीए जस्तो नभएको भनी लेखेर पठाएको थाहा पाए। बिहानै देखि केही पत्रकारहरुको फोन आउन शुरु भएको छ। उनको म्यासेज कुनैपनि समयमा सार्वजनिक हुने क्रममा छ। जिवनमा भएका घटनाहरु मात्र बताएर अतीतका कथा कहाँ पूरा हुन्छ्न र।अनेकौ घटना बिच २४ वर्ष बितेका हुन जसलाई खोतल्दा सन्तानको मानसिकतामा असर गर्दछ। पछिल्ला वर्षहरुमा पुर्व पत्नी सङ बोल चाल समेत नभएको अवस्थामा मैले एक्लै बस्ने वा उठेर फेरि हिड्ने भन्ने निर्णय गर्नु नै थियो। बाहिर को वाह वाही तर घर भित्रको एक्लोपनले म कयौ पटक बिरामी परे र झण्डै डिप्रेशन को शिकार नै भएको थिए। माया र बिश्वास बर्षौ सम्म मरेको सम्बन्धलाई सहमतिमा र अदालतबाटै टुंगो लगाएर गए पछि उनलाई मैले छ्ल गरेको कसरी लागेछ,म बुझ्न सकिरहेको छैन।अब मसङ बाकी रहेको थोरै नाम र इज्जत छ। त्यस्मापनि आँखा लागेछ। त्यसैले,आज त्यो पनि दिन चाहन्छु।
मेरो “नकाब” उतार्न र आफ्ना कर्तुतहरु सर्वजनिक गरि मलाई सिध्याउन लागि पर्ने मित्रहरूलाई र पुर्व पत्नीलाई म आफै खुलेर सहयोग गर्न चाहन्छु। मन परेको हेडलाईन हालेर स्वाद अनुसारको मसला मोलेर पस्क्नुहोला। यति मै मेरा कर्तुतहरु सकिदैनन, बाकी सुन्न रिपोर्टर खटाउनै पर्दैन मै खुलासा गरिदिउला। दुर्गममा परिवारको बिचल्ली पारेर मानिस युरोप अमेरिका भागेका छन, मैले आफ्नी पुर्व पत्नी सहित, आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका जस्तो देशमा (उनिहरु नेपाल आउन नमानेपछी) आफू नेपाल बसेर,सम्पुर्ण आफ्नो जायजेथा सुम्पेर,अझै अमेरिका बस्दाको पुरै ब्यवस्थापन यतिबेला सम्मपनि गर्दै आएको छु।अदालतमा न्यायाधीशका सामुन्ने राजी खुशीले, म सङ भएको र शायद भविष्यमा समेत हुन सक्ने सबै लिएर आफ्ना वकिल र उनका आफ्ना परिवारका सदस्यको रहोबरमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेर अमेरिका गएकी उनलाई के अन्याय भो मैले बुझिन।
अब म बर्षौको एक्लो जीवन र असफल सम्बन्धहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बड्न चाहन्छु। कसैमाथी अन्याय नगरी म आफू माथीपनि न्याय गर्न चाहन्छु।म भागेको छैन,प्रत्यक मंगलबार बिहिवार र शनिबार राति ८:४५ मा news 24 टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष आउछु।भोलि रातिपनि आउदैछु। सदाझै उहीँ जोश, उहीँ उमंगका साथ। श्रीमान, म जीउँदै छु।
रवि लामिछानेको पुर्वपत्नी ईशा लामिछानेको खुलासा भनि अनलाईन मिडियामा आएको दाबी:
रविको बिहे निकिता पौडेलसंग हुँदै “नमस्कार म ईशा लामिछाने, रवि लामिछानेको पुर्वपत्नी ।” म्यासेन्जरको आवाजसंगैको म्यासेज थियो । परिचयसहित रिप्लाई नहुँदै ईशाको म्यासेज आयो, “मसंग रविका बारेमा केही भन्नुछ तपाईले मिडियामा छापेर सहयोग गरीदिनुहुन्छ भने ।” तुरुन्तै ईशाको फेसबुक वालमा नजानुको विकल्प थिएन् । केही पोष्टहरु थिए जस्ले ईशा र रवि लामिछानेको सम्बन्धलाई प्रष्ट्याउथे । रवि अर्थात उनै रवि जो अहिले सामाजीक सञ्जालमा छाईरहेका छन् । सिधा कुरा जनतासंग प्रशारणसंगै बेथीति र समाजका कर्तुतबारे चर्को आवाज गर्ने कार्यक्रम प्रस्तोता । ३ करोड नेपालीका भगवान भनेर सामाजीक सञ्जाल फेसबुकतिर बनेका उनका नामका पेजबारे पनि अनविज्ञ छैन् । ईशा लामिछाने नाम गरेको केटीले एउटा म्यासेज गर्दैमा पत्याईहाल्ने कुरा पनि भएन । उनको म्यासेज यसरी आएको थियो कि त्यसको रिप्लाई मैले एउटा गर्न नपाउदै अरु थुप्रै कुरा उनले लेखीसकेकी हुन्थीन् । केही समयअघि मात्र नेपाल आएर अमेरीका उडीसकेकी ईशाले अमेरीकाबाट च्याटमा केही तस्विरहरु पठाएकी थिईन् । २५ बर्षअघि रवि र ईशाको बिहे भएको उनको भनाई छ । २३ बर्ष र १५ बर्षका दुईवटी छोरी ईशासंगै छन् । ईशाले बाउछोरीको फोटो पठाईन् । “मलाई झुक्काएर र दबाब दिएर अस्ति मंसिरमा डिभोर्स गरायो । उसको दबाबका कारण म नेपाल आएर डिभोर्स पेपरमा साईन गरेर मंसिरको १० गते अमेरीकाका लागि उडेँ ।”
उनले थप प्रष्ट पारिन फोनमा । रवि लामिछानेले आफुलाई मात्र नभई अरु महिलालाई पनि बबार्द पारेको उनको दावि छ । “मसंगै हुँदा पनि उस्ले अरु दुईवटा महिलाहरु राखेको थियो । एकजना अमेरीकी महिलाको नाम लैला सर्जाद हो । त्यो महिलातर्फ पनि रविको एउटा छोरो छ ।” ईशाले यसरी भनिरहेकी छन् की, मैले पत्याउन सकिरहेको छैन् । किनकी रविले यस्तै अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई टेलीभिजनको स्किृनमा बसेर अन्याय गर्नेलाई लाईभ स्ट्रीमिड्डमा ल्याएर, झपारेर, थर्काएर, धम्काएर भएपनी माफी मगाएका छन्, कारबाही दिलाएका छन् । रुदैँ स्टुडीयो पसेका महिलालाई न्याय टप्प थमाईदिएका छन् । ईशाले मुख फोरिन, “म संग डिभोर्स गरेकै बेला निकिता पौडेलसंग ईङ्गेजमेन्ट गरेको छ ।” केही आत्तीएको भावमा उनले बोलीन सायद अब केही दिनमा बिहे गर्छ होला, उस्ले बिहे गरोस् मेरो कुनै गुनासो रहेन तर मलाई २५ बर्षसम्म किन चिटिङ गरिरह्यो । दुई दुई वटी छोरीको भविष्यमाथी खेल्यो किन खेल्यो ।”
निकिता पौडेल अर्थात चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष, उनका वुवा उद्धव पौडेल गोपिकृष्ण हलका मालिक । निकिता संगको बिहेको कुरामा ईशाको यती जोड थियो कि उनी बबार्द भएर रविले यता अर्को लगनगाँठो पार्दैछन् जुन उनका लागि पिडादायक थियो । रविबाट आफुलाई अन्याय भएको भनीरहेकी ईशाले थपिन, “तपाईहरुलाई थाहा छैन, रविको असली रुप २५ बर्षसम्म मैले भोगेको छु ।” रविले अहिले गरिरहेको काम र उनको लोकप्रियताबारे जानकार ईशाले आफुलाई गरेको अन्यायबारे दुनियाले थाहा पाउनुपर्ने बताउदै थिईन् ।” “रविले म संग गेम रच्यो ? म संग खेल्यो, मैले उसका लागि गरेको कुनै अर्थ नै भएन् ।” ईशाले बोलीरहिन्, “रविले आफ्नो परिवारलाई रुवाएर दुनियालाई भाषण दिएर हिँडेको छ ।” ईशा र माईतीमा टर्चर “रविले पैसा दिएर मलाई डिभोर्सका लागि दवाव दिएको हो ।” केही महिनाअघिमात्र आफै डिभोर्स पेपरमा साईन गरेर जानुभएको होईन भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ । “तिमिहरुको ममिले डिभोर्स नदिए अमेरीकाको सबै घर मै लिन्छु, अनी तिमिहरुको बिजोग हुन्छ भनेर छोरीहरुलाई धम्कायो ।” उनले भनिन्, त्यसपछि मैले छोरीहरुको मुख हेरेर, उनीहरुको भविष्य सम्झेर मेरा खुसी डिभोर्स पेपरमा बन्धक राखेँ ।” ईशासंग केहीदिनदेखी उनको समस्या र पिडाबारे कुरा चलीरहेको थियो । लेख लेख्नु अघिल्लो रात ईशाले माईतीमा रविले टर्चर दिन थालेकोे सुनाईन । “मेरो दाईलाई र परिवारलाई टर्चर दिएको छ, मैले मिडियामा बोल्न थालेँ भनेर ।” काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ उनको माईती । “न्युज नछाप्न भन्दै दाईले अहिले को को लाई फोन गर्दै बस्नुभएको छ ।” उनले भनिन् । उनले रवि र आफ्नो छोडपत्र गराउन चलचित्र बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, विज्ञापन व्यवसायी निर्मल पौडेल र रविका सहयोगी दिपक बोहोरा हात धोएर लागेको बताईन् । “मलाई रातदिन च्याटमा रविलाई छाडि दे रविलाई छाडिदे भन्नेहरु यी नै हुन् ।” निकिता र दिपकतर्फ संकेत गर्दै उनले भनीन्, “उनीहरुले पनि पैसामा मलाई पन्छाउन लागि परेका हुन्।
A critical market force that at retail levels people want to use spice / flavorings
Eating Etiquette in Ayurveda: Way to Complete Health
नितिशकुमारले मधेसी नेताहरुलाई पहाडी, मधेसी र जनजाति सबै नेपाली भएको नभुल्न सुझाव दिए!
नेपाल “सहिद ” मा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेन।